Isifunda Sokushicilela se-TrovaWeb Multiservice
THOLA I-CITCUIT CIRCUIT TROVAWEB YOKUHLELA
Sibonga u Umbukiso wemultimedia yakhelwe ukubeka phansi -Google, wakho inkampani izotholakala ngokusesha abasebenzisi abakwenzayo Injini yokusesha. Izinkampani ezijoyina i Ukujikeleza kwesihleli, ngokumelene nokubhaliselwe okuncane, bazoba nakho konke ukubonakala badinga ukwenza ibhizinisi labo libe yinzuzo.
I-Multiplatform Portal enama-portals ayi-11 ahlanganisiwe neKlabhu Yokwabelana Ngomphakathi
Noma ngubani angakwenza yazi, khulisa oxhumana nabo futhi ugcine ubuqotho amakhasimende ayo futhi ngaphezu kwakho konke ukukhombisa imikhiqizo nezinsizakalo zayo ngeplatifomu yethu Ukwabelana Komphakathi ezinikezelwe kumabhizinisi nakwabaqeqeshiwe. Kumayelana I-Club TrovaWeb, lapho ungashicilela khona ngokuzimela nangaphandle komkhawulo kukhangisiwe, isithombe, ividiyo, ukucaphuna, Izindaba, survey, ngisho e amaphromoshini.
Uzoba nakho konke Umjikelezo Wokuhlanganiswa Okuhlanganisiwe kahle Izingosi eziyi-12 ukuthi iTrovaWeb yenza itholakale kumakhasimende ayo.
Le Imibukiso ye-Multimedia ITrovaWeb iyindawo engenakutholakala Ithuluzi lokuqinisa ibhizinisi lakho kanye nokukhushulwa komuntu umsebenzi wobungcweti.
Ubambiswano olukhulu lokukhulisa ibhizinisi lakho
Umkhiqizo I-TrovaWeb futhi lonke uhla lwalo lomkhiqizo e izinsizakalo zedijithali bayithuba elihle kakhulu lokukwenza Business emhlabeni we Ukukhangisa kwewebhu ivulekele bonke. Izinkampani, imisebenzi kanye ochwepheshe womkhakha ngamunye uzojabulela ukubambisana neqiniso emkhakheni Digital iminyaka engaphezu kwengu-20.